တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီက အမျိုးသားနေ့ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံပွဲကျင်းပ - Xinhua News Agency
"ပြည်သူကိုဦးထိပ်ထားခြင်းကိုခိုင်မာစွာ လက်ကိုင်ပြုခြင်း" က တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အောင်မြင်မှု သော့ချက်ဖြစ်
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီသည် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ပေကျင်းမြို့ရှိ ပြည်သူ့ခန်းမဆောင်၌ ၇၂ နှစ်မြောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း ဂုဏ်ပြု ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ရှိ ပြည်သူ့ခန်းမ၌ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၇၂ နှစ်မြောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း ဂုဏ်ပြု ဧည့်ခံပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ရှိ ပြည်သူ့ခန်းမ၌ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၇၂ နှစ်မြောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း ဂုဏ်ပြု ဧည့်ခံပွဲ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ ဟန့်ကျိန်း က မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယင်းအခမ်းအနားသို့ တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ရှီကျင့်ဖိန် ၊ လီခဲ့ချန် ၊ လီကျန်ဆူး၊ ဝမ်းယန် ၊ ဝမ်ဟုနင်း ၊ ကျိုလဲ့ကျိ ၊ ဟန့်ကျိန်း နှင့် ဝမ်ချီစန်း အပါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်တော် ၅၀၀ နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, Sept. 30 (Xinhua) — China’s State Council on Thursday heldareception at the Great Hall of the People in Beijing to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China.
The reception, heldaday ahead of the National Day, was attended by the Communist Party of China and state leaders Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan, as well as nearly 500 guests from home and abroad. Enditem
(1) The Communist Party of China and state leaders Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan, attendareception to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China along with nearly 500 guests from home and abroad in Beijing, capital of China, Sept. 30, 2021. China’s State Council on Thursday held the reception at the Great Hall of the People in Beijing. (Xinhua/Xie Huanchi)
(2) Chinese Premier Li Keqiang addressesareception held by the State Council to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Sept. 30, 2021. (Xinhua/Shen Hong)
(3) Chinese Vice Premier Han Zheng, alsoamember of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee, presides overareception held by the State Council to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Sept. 30, 2021. (Xinhua/Xie Huanchi)